SomaliTalk.com » Waxbarasho
Home » Waxbarasho
Safaaradda Soomaaliya ee Pakistan iyo dhibaatada ay ku hayso ardayda dalkaas waxkabarata. Mahad oo idil waxay u sugnaatay Allah abuuray koonka, cirkana taagay tiir la’aan. Naxariis iyo nabad galyo nabi Muxammad dushiisa ha ahaato. Hordhac Dalka Pakistan wuxuu ka mid yahay dalalka ardayda ugu badan ee Soomaaliyeed wax ka barato. Waxaana lagu qiyaasaa ardayda wax kabarata ku dhawaad 1000 arday oo dhigta...